Allahu Akbar Maxad ka taqaana Misaajidadii uu Nabi Muxumed ku tukaday – Murtimaal
Allahu Akbar Maxad ka taqaana Misaajidadii uu Nabi Muxumed ku tukaday
Allahu Akbar maxaad ka taqaanna Masjid ay nabi Muxumed SCW iyo Nabiyo kalaba ku tukadeen , ? Goobaha Barakaysan ee magaalada Barakaysan ee Makaha ku yaalla oo ah meelaha xilliga xajka ay dadku tagaan, dhammaantood marka laga tago qiimahooda diineed waxa ay leeyihiin qiime taariikheed oo mid kastaa xusuustiisa leeyahay.
Qormadan oo uu murtimaal Afsoomaali u rogay waxa aynu ku eegaynaa masaajidka aanay dadku aalaaba magaciisa u aqoonin ee Al-Khiif. Masjidkan oo qof kasta oo waajibka xajka soo gutay uu garanayaa waxa uu ku yaallaa buurta Mina, waxa aanay taariikhdku u xustay in uu yahay masaajid ay ku wada tukadeen Nebi Muxammed (SCW) iyo Nebiyadii ka horreeyey. Laakiin waxaa taas ka sii weyn oo taariikhda ugu jira in uu yahay masjidkii uu nebi Muxammed (SCW) ka jeediyey khudbaddiisii dardaaranka ahayd ee ugu dambaysay, markii uu gutay xajkii uu dabadii geeriyooday ee loo bixiyey Xajka sagootinta.
Previous Post:Gabadh iyo kaneeco maxay u jeceshay
Next Post:Daawo laba fanaan oo caan ah oo si run ah uGu dagaalami doono ciyaar feer ah kii guulaysta ay raaci doonto gabadh